Garsoorka Waa Furaha Nabada iyo Nolosha Wanaagsan. – Qaranimo Online
You are here: Home 2017 May 7 Garsoorka Waa Furaha Nabada iyo Nolosha Wanaagsan.
Garsoorka Waa Furaha Nabada iyo Nolosha Wanaagsan.
Posted on May 7, 2017 by Omar Farah | 0 Comments
Horaa loo yiri “umadaan Garsoor lahayn, waa geed aan Hoos lahayn”
Sida lawada ogyahay, Umadi waxay ku dhisantaa, ku dhaqantaa, kuna dhowrsanatahay waa Garsoorka, hadii uu san jirin Garsoor kala ilaaliya Xaqa iyo Xaqdarada, waxaa sahal ku dhuma jiritaanka umadeed iyo nolosha Aasaasiga ah ee umadi leedahay.
Somaaliya waxay lahayd dhamaan Tiirarka aasaasiga ah ee Gorsoor leeyahay, inkastoo waqtiyo dhexe si qaldan loo isticmaalay, hadana waxaan ka horeenay wadamo badan oo manta isu haysta in ay naga horeeyaan, taasina waxaa sababay Dagaaladii Ahliga ahaa ee ay Hogaaminayeen Shaqsiyaad aan Fahamsanayn dhimaabatada ay leeyihiin Dagaalada sokeeye.
Laga soo bilaabo 2000-kun ilaa waqtigan 2017, Dalka wuxuu ka horu mari la’yahay dhibaatooyinka ka jira dhinaca Garsoorka, waana caqabada ugu wayn ee Hortaagan soo celinta Nabada iyo kala Dambeynta, waana sababta ilaa iyo waqtigan looga bixi la’yahay Fowdada iyo Cadaalad darada ka jirta Dalka.
Garsoor la’aanta ka jirta dalka, waxay dib u dhac ba’an ku riday noloshii aasaasiga ahayd ee Shacabka iyo Horumarka dalka, waana qodob muhiim ah oo u baahan in si deg deg ah wax looga qabto, si loo helo Nabad iyo kala dambeyn Waarta.
Hadaba, waxaa mudan in la iswaydiiyo, sidee lagu soo celin karaa Tiirarka Asaasiga ah Garsoorka? Sideese lagu gaarsiin karaa ilaa heerka ugu sareeyo?, aqristow ila firi Talooyinkan.
Waa in loo diyaariyo Dhaqaalihii iyo Xafiisyadii lagu shaqayn lahaa.
Waa in uu Xeer ilaaliyaha Guud Soo saaraa, Shaciyo Ciqaabeed, lagu qaadi karo, Garsoorihii lagu Helo Musuq Maasuq ama Qaadasho Laaluush, iyadoo laga ansixinayo labada Gole.
Waa in la helo awood Ciidan oo lagu fuliyo, Horumarinta Garsoorka.
Waa in la helo dad aqoon u leh fulinta Garsoorka iyo kal kaliya yaashoda.
Waa in laga soo bilaabo fulinta Garsoorka Degmooyinka, ama Xarumaha hoose.
Waa in loo sameeyaa wacyi Gelin dad waynaha, si loo fahamsiiyo Raadsiga Xuquuqdooda.
Waa in uu mutaysan karaa Xukun Adag oo CIQAAB ah, Garsoorihii fuliya Xukun Cadaalad daro ah, isagoo Qaatay Laaluush.
Waa in marka hore lasiiyo Siminaaro isdaba jog ah, Howl wadeenada Garsoorka.
Waa in la helo Abuukata yaal u dooda dadka dhibanaha ah, iyadoo la fiirinayo Duruufta Shacabka.
Waxa ugu badan ee manta dhibka kajiro waa dhulalka, hadaba waa si deg deg ah in loo helaa Rajistarkii Hore ee dhulka, waayo sida aan maqlay ilaa iyo hada DIIWAANKA wuxuu ku jiraa Gacan Shacab oo Amaan ah.
War iyo Dhamaan, waxaan Fariin Culus u dirayaa Xeer ilaaliaya Guud, Dowlada iyo labada Gole in si deg deg ah wax looga qabto, dhibaatooyinka ka jira Dhinaca Garsoorka, iyadoo la adeegsanayo kalsoonida Shacabku idin siiyeen, si Shacabku u gaado in uu jiro dadaalo wax looga qabanayo Cabashooyinkooda, loona kasbado kalsoonida Shacabka, waayo asalka ama aasaaaska dowladnimo waa kalsoonida Shacabka.
Ugu dambayn, somaalidu waxay tiraahdaa “Waari mayside, war hakaa haro”, Dowlada iyo labada Gole, waxaan leeyahay, waxaad ogaataan in laydin kula xisaabtami doono, wixii Wanaag iyo Xumaan ah ee aad samaysaan inta ka dhiman waqtigiina, midna ogaada Taariikhdu waa DHAXAL aan duugoobin ee yaan la dayicin Danta Dadka iyo Dalka.
Baaqeenu waa “Daryeelow dadaal, dumiyo Nadaa”
Baarlamaanka Puntland iyo Mooshin ka dhan ah Madaxweyne Gaas January 3, 2017
Madaxweyne Xasan Sheekh oo booqday Xeebta Liido, kana hadalay Dhibaatadi ka dhacday January 23, 2016
Dowlada Soomaaliya oo sheegtay in ay waxka qaban doonto dhibaatooyinka haysata tahriibayaasha Soomaalida ah June 13, 2017
DAAWO: Madaxda gobolka Banaadir oo shaqadoodu noqotay xaflado iyo inay canshuurta uruursadaan ! April 25, 2016
Isku shaandheynta oo xog dheerad ah ka soo baxday. November 5, 2015
Afweyne iyo Tiicey oo xabsi lagu xukumay March 15, 2016
Somaliland internet firms block access to news sites, raising censorship specter January 9, 2017
Dareenka Qurba joogta iyo Qaraxyada Muqdisho ! November 3, 2017
Dhagayso:- Wasiirka Dastuurka oo eedayn kulul loojeedshay June 19, 2017